FAALLO:Tahriib kadibna Tarxiil | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta FAALLO:Tahriib kadibna Tarxiil
FAALLO:Tahriib kadibna Tarxiil
Tan iyo markii Donald Trump loo doortay Madaxtinimadda dalka Mareykanka, waxaa la soo Masaafuriyay Soomaali gaareysa 225 oo ruux, iyadoo ay Dadkaasi ka qeyb yihiin in ka badan 4 kun oo ruux oo lagu hayo xabsiyada Dalka Maraykanka, kuwaasi oo sugaya iyana musaafuris, waxaana la ogsoon yahay in Soomaalidu ay ka mid tahay lix wadan oo Trump uu sheegay in aysan dalka Mareykanka gali karin mudo 90 cisha ah, iyadoo Dadkaasi la soo celiayay ayaa waxay dalbadeen in dib loogu celiyo Soomaaliya, kadib markii loo diiday inay helaan sharciyad Dal kun joog ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka hadlay arrinta xayiraadda uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu saaray lix dal oo Muslimiin ah, sidaasi awgeed ayay Madax badan oo ka tirsan Dowladda Soomaaliyeed siyaabo kala duwan uga hadleen, waxayna xuseen in 150 kun oo qof oo Soomaali ah inay gacan ka geysteen dhaqaalaha Mareykanka iyo bulshooyiinka Mareykanka qaabab kala duwan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay waxtarka Bulshada Soomaalida wucxuuna yiri “Waa inaan ka hadalnaa waxtarka dadka Soomaalida ay ku leeyihiin Mareykanka, halkii aan ka hadli lahayn dhowr qof oo dhibaato sababay”.
Madaxda ka hadashay Arrinta Tarxiilka waxaa isna ka mid ah Safiirka Soomaalida u fadhiya Dalka Maraykanka Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay waddo qorshe dalkeeda ay uga musaafuriyo Soomaali gaaraysa 4’000 (afar kun oo ruux), wuxuuna intaasi raaciyay in Dowladda Maraykanka ay waddo qorshayaal dalkeeda ay uga soo celineyso dadka Soomaaliyeed ee mudda ku noolaa dalkaasi.
“Waxaa jira dad hadda ku sugan goobaha laga diiwaan geliyo dadka la musaafurinayo oo gaaraya 300 oo soomaali ah, kuwaasi oo sugaya in dalkooda dib loogu soo celiyo waxaa kaloo jira howlgalkii ugu dambeeyay ee hay’adaha Socdaalka in lagu soo qabtay dad gaarayay 80 ruux oo uu ku jiro nin Soomaali ah” Ayuu yiri Safiir Axmed Ciise Cawad.
Safiirku waxa uu dhawaan shaaciyay in aysan jiri doonin qab-qavsho baahsan oo Dadka Soomaalida u gaar ah, islmarkaana aan laga soo qaban doonin Guryaha,Waddooyinkja iyo goobaha shaqada, si raaf camal ah, isagoo intaasi ku daray in Waaxda socdaalka Dalkaasi ay ka ballan qaadeen in mar kale aysan dhici doonin arrintaasi.
Dowladda Maraykanka ayaa horay u diiday in dalkeeda ay ku noolaadaan dad ka soo jeeda 6 Wadan oo Soomaaliya Qeyb ka ahayd waxaana xilligaas wixii ka dambeeyay dalka dib loogu soo celiayay soomaali muddo ku nooleyd Maraykanka.
Qaramada Midoobeey ayaa ugu baaqday Madaxweynaha Wadanka Maraknaka Donald Trump inuu sii wado soo dhoweynta qaxootiga, iyadoo aan la eegeyn jinsiyadooda, dalka ay ka soo jeedaan iyo diintooda.
Haddaba iyadoo ay taasi jirto ayaa Qoraal ka soo baxay Waaxda Fulinta arrimaha socdaalka iyo Kastamada ee Dalkaasi oo loo yaqaan ICE ayaa lagu xaqiijiyey celinta Muwaadiniin u kala dhalatay Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasi oo laga kala soo dejiyey Nairobi iyo Muqdisho.
Qoraalka ka soo baxay ICE ayaa lagu sheegay in hey’addoodu ay Maraykanka ka saartay toddoba qof oo u dhashay dalka Kenya iyo 67 qof oo u dhashay Soomaaliya, kuwaasi oo heystay go’aankii kama dambaysta ahaa ee dalka looga saari lahaa, waxaa kaloo ay sheegtay in hey’addoodu ay bartilmaameedsato dadka aan sida sharciga ah ku joogin dalkan Maraykanka iyo kuwa halista ku ah amniga Qaranka, Xasiloonida Guud iyo Ammaanka xuduudaha Maraykanka.
ICE ayaa sheegtay inay bartilmaameedsanayaan dhammaan dadka ku xadgudbay shuruucda socdaalka Maraykanka, iyaga oo xidhaya, haddii amar lagu bixiyo in dalka laga saarona ay fududaynayaan sidii dalalkooda loogu celin lahaa.
Qoraalka ayaa intaasi ku daray in 67 qof ee Soomaalida ah, markii ay gaadheen Magaalada Nairobi in looga soo duuliyey Muqdisho, halkaasi oo Masuuliyiinta Soomaaliduna ay xaqiijiyeen inay gaareen Muqdisho.
Shalay oo Jimco aheyd ayay Diyaarad sidday Dadkaasi Soomaalida ah oo laga soo tarxiilay dalka Maraykanka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aadern Cabdulle Cusmaan aaden aaden Cadde ee Magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen Warbaahinta, waxaa kaloo ay sheegeen in dadka la soo tarxiilay haatan laga diiwaangeliyay garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, waxayna intaasi raaciyeen in mas’uuliyiinta Maraykanku u sheegeen Soomaalida in dadkani ay ku jireen xabsiyo ku yaalla Maraykanka halka qaar kalena ay ku guuldarraysteen inay magangelyo helaan.
Dadkaasi waxaana lagu sheegayaa in ay yihiin kooxdii seddexaad ee Muwaadiniin Soomaali ah ee laga soo tarxiilo Maraykanka tan iyo intii uu xukunka Maraykanka qabtay Madaxweyne Donald Trump, iyadoo Bishii Jannaayo ee sanadkaani la soo tarxiilay 90 qof, halka bishii Maarso la soo tarxiilay 68 qof, waxayna tirada guud ee ilaa iyo hadda la soo tarxiilay ay ka dhigeysaa 225 Ruux.
Haddaba Soomaalidu waxay ka daashay tachriib ay dhib badan u gasho si ay u gaarto meesha ay hiiigsaneyso, kadib daal iyo dhibaato kadib ayaa hadana la soo tarxiilayaa, marka waxaa looga baahan yahay Dadka Soomaaliyeed inay gartaan dhibaatada ay kala kulmaan tahriibta ay ka dambeyso Tarxiilidda, ayna Dalkooda iimaasadaan, waayo waxaa la yiri Dal aadan laheyn waa dareen ku joog.
Previous articleMadaxwayne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay
Next articleWarbixin:Taariikhda Halgankii SYL